अब बलात्कारीको लिङ्गछेदन गरिने !
काठमाडौँ । संविधानको पहिलो मस्यौदामाथि सुझाव सङ्कलन गर्न नयाँ बानेश्वरमा आयोजित कार्यक्रममा अधिकांश वक्ताले अब बन्ने नयाँ संविधानमा राजनीति गर्ने सबैको शैक्षिक योग्यता र उमेरको हद तोकिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । कार्यक्रममा संविधानको मस्यौदामाथि...
अब भाडामा आमा ल्याएर बच्चा जन्माइने रे !
काठमाडौं, ५ साउन । भाडाका आमाबाट सन्तान जन्माउने पद्धति (सेरोगेसी मदर)लाई वैधता दिन सरकारले तयारी गरेको छ । सेरोगेसी मदर कार्यक्रमलाई स्वीकृति दिँदा दुरुपयोग बढ्ने भन्दै सरोकारवालाहरूले विरोध जनाउँदै आएका छन् । काठमाडौंका केही...
खेलौनाबाट यौन प्यास मेटाउने नेपाली युवतीहरु
– बिश्वास खड्काथोकी भाइवर, फेसबुकमा म्यासेज आउँछ, ‘मलाई पेनिस, टाइटेनिङ जेल ल्याइदिनुपर्‍यो ।’ तर, उनले आफ्नो नाम सत्य बताउँदिनन् । साथी अथवा आफन्तलाई चाहिएको बताउँछन् । आफ्नो फोन नम्बर पनि भाइबरमै हालिदिन्छन । र,...
लौकाको जुसले रगत शुद्ध गर्ने काम गर्छ । लौकाको तरकारी र जुस मुटु रोगीका लागि निकै फाइदाजनक मानिन्छ । शरीरको कुनै भागमा रगत बगिरहेको छ भने लौकाको बोक्राको लेप लगाउँदा रगत बग्न बन्द हुन्छ...
तनावपूर्ण जीवन जिउने मानिसमा के-के समस्या देखिन्छ ?
काठमाडौं । जसले तनावपूर्ण जीवन बिताउनुपर्ने बाध्यता हुन्छ उसले सामान्य भन्दा धेरै आराम गर्नुपर्ने कुरा स्वीडेनमा गरिएको एक अध्ययनले देखाएको छ । यदि कुनै मानिस आफूलाई तनावपूर्ण वातावरणमा धेरै समय बिताउनुपर्छ र उसको सुत्ने...
तेह्र प्रतिशत बालबालिका पूर्ण खोप सेवाबाट वञ्चित
काठमाडौँ । गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने जनताको नैसर्गिक अधिकारको प्रत्याभूति गराउन खोप व्यवस्थापनको स्तरीय कार्य सञ्चालन गर्नुपर्नेमा विज्ञले जोड दिएका छन् । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन, युनिसेफ र स्वास्थ्य सेवा विभागको सहयोगमा लाइफ लाइनको आयोजनामा...
सुत्केरी व्यथामा छट्पटाइरहेकी महिलासँग डाक्टरले यस्तो हर्कत गरेपछि…
काठमाडौं । अस्पतालमा एक डाक्टरले सुत्केरी व्यथामा छट्पटाइरहेकी महिलासँग सेल्फी खिँचेर विवादमा आएका छन् । केही व्यक्तिहरुले उनीविरुद्ध कारवाहीको माग राखेका छन् । डैनियल सांचेज नामका यी डाक्टरले यो फोटो इन्स्टाग्राममा अपलोड गरेका छन्...
यसकारण बिरामी जाँच्ने छन्, महेश्वर ठाकुरका छोराले
सुनसरी, २ साउन । आयस्रोत कम भएकाको पहुँचभन्दा बाहिर हो एमबीबीएस पढाई । यहाँका पसले महेश्वर ठाकुरले भने त्यही व्यवसायले छोरालाई डाक्टर बनाउन सके । एक वर्षपछि उनका जेठा छोरा जितेन्द्र बिरामी जाँचिरहेका हुनेछन्...
यी आमा भन्छिन्-‘छोराहरुले मलाई सधै नाङ्गै देखुन्’
म चार जना छोराका साथ रहन्छु । उनीहरुको तस्बिर हेरेरै अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ कि उनीहरु सानै छन् । उनीहरुको सिरानमुनि वयस्क पत्रिका होला वा लुकेर पोर्न मुभी हेर्छन् होला भन्नेमा मलाई अहिल्यै चिन्ता गर्न...
बच्चा जन्माउने योजनामा हुनुहुन्छ ? जान्नै पर्ने १४ कुरा
कसरी जन्मन्छन् छोराछोरी ? लोग्ने मानिसमा एक्स र वाई दुवै क्रोमोजम हुन्छ भने महिलामा एक्स एक्स मात्र हुन्छ । त्यसैले लोग्नेमानिस र स्वास्नी मानिसबीच यौन सम्पर्कपछि छोरा पाउन लोग्ने मानिसमा मात्र हुने वाई आउनुपर्छ...
बजेट अपडेटः अब गर्भपतन गर्नका लागि पैसा नलाग्ने, बृद्धाभत्ता हजार पुग्यो
काठमाडौं, २९ असार । अव सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा सुरक्षित गर्भपतन गर्नका लागि पैसा नलाग्ने भएको छ । प्रस्तुति हुँदै गरेको बजेट भाषण मार्फत अर्थमन्त्री रामशण महतले यस्तो घोषणा गरेका हुन् । यसअघि सुरक्षित गर्भपतन...
राजधनीका मदिरा प्रेमीलाई मरेको सिनो र हड्डीको रक्सी !
काठमाडौं, २३ असार । जोरपाटी नयाँ बस्ती अखाद्य वस्तुबाट उत्पादन गर्दै आएको रक्सी भट्टीमा बौद्ध प्रहरी महानगरीय वृत्तले छापा मारेको छ । मानव जीवनमाथि खेबाड गर्ने गरी अवैधरुपमा सञ्चालन गर्दै आएको रक्सी भट्टीमा मरेको...